सुरज कुमार अर्याल : साताको ब्लगर - MeroReport
सुरज कुमार अर्याल : साताको ब्लगर
ब्लगर सुरज अर्यालको कथा "मृत्यु बिक्रीमा छ" ब्लग पढ्नेहरुबिच छिट्टै ठुलो लोकप्रियता हासिल गर्यो । ६ भागमा लेखिएको झण्डै लघुउपन्यासजत्रो लम्बाइको यो कथा तीन हजारभन्दा बढीले पढेको सुरजले बताउँछन् । यो सफलताबाट हौसिएर उनले अर्को धारावाहिक कथा पनि पोष्ट गर्न थालेका छन् "…अनि म बेश्या बनें" । पहिलो भाग पोष्ट भएको यो कथा कति भाग जाने हो थाहा छैन । @Chhucho_Keto नामबाट ट्वीटरमा चिनिने यिनै लामा कथा लेखकलाई यो पटक हामीले साताको ब्लगरको रुपमा प्रस्तुत गरेका छौः
तपाईँले ब्लगिङ कसरी थाल्नुभयो ?
आजभन्दा ३-४ वर्ष अगाडिको कुरा हो, वेबडेभ्लपिङ्मा मेरो रुचि थियो । इन्टरनेटबाट केही खोज्दै सिक्ने गर्थेँ । आफूले सिक्नको लागि र अभ्यास गर्नको लागि मैले ब्लगिङ् थालेको हुँ । त्यसपछि लगभग दुई वर्ष अगाडि साथीहरुसँग मिलेर www.hamropathsala.com टेक्नोलोजी ब्लग सुरु गरेका थियौँ । पछि विभिन्न कारणले यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन र म एक्लैले एक वर्षसम्म चलाएँ । त्यसलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भयो र बन्द भयो । त्यसपछि मैले आफ्नै व्यक्तिगत साइट http://arlsuraj.com/ शुरु गरेँ ।
के-के पोस्ट गर्नुहुन्छ ब्लगमा ?
वेभ डेभलपसम्बन्धि र अरु कुराहरु पोस्ट गर्नको लागि मैले ब्लग शुरु गरेको थिएँ । कहिलेकाही मनमा लागेका राजनितिक कुराहरु, कथा, कविता, निबन्ध र गजलहरु पोस्ट गर्ने गरेको छु ।
अरूले निकै रुचाउनु भएको कुनै ब्लग पोस्ट छ ?
मैले एउटा कथा मृत्यु बिक्रीमा छ” श्रृङ्खलामा लेखेको थिएँ । यस कथाले सोसल मिडियामा राम्रो चर्चा पायो । मेरो यस कथाको श्रृङ्खलाले सोचेको भन्दा निकै राम्रो प्रतिकृया पाएको छ ।
तपाईँको कथा “मृत्यु बिक्रीमा छ” को बारेमा केही बताइदिनु दिनुस न ।
“मृत्यु बिक्रीमा छ” कथामा म आफू पात्र भएर लेख्दा मलाई अझै पनि मर्ने रहर छैन, बाँच्ने रहर छ र यो मृत्यु कसैले किन्छ भने म त्यसलाई बिक्री गर्न तयार छु । मलाई अजम्बरी भएर बाँच्न रहर छ भनेर लेखेको छु । यस कथाबाट मैले पाठकहरुबाट राम्रो प्रतिकृया पाइरहेको छु ।
“मृत्यु बिक्रीमा छ” कथा ज्यादै लोकप्रिय पनि बन्यो । कुनै उल्लेख्य प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
“मृत्यु बिक्रीमा छ” भन्ने कथा पढेर एकजना पाठकले तपाईँको कथा राम्रो लाग्यो, मलाई तपाईँको कथा पढेर कथा जत्तिकै लामो इमेल लेख्न मन लाग्यो भनेर भन्नुभएको थियो । उहाँले लामो इमेल लेखेर त्यसमा राम्रो प्रतिकृया दिनुभएको थियो । आफूले लेखेको ब्लग पढेर त्यति विस्तृत रुपमा प्रतिकृया दिनुभएकोमा मलाई निकै खुसी लागेको थियो ।
ब्लगिङ् गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के-के हुन् ?
ब्लगिङ् गर्दा भाषा, धर्म, लिङ्ग, जातिको आधारमा कसैलाई पनि नहोच्याइकन ब्लगिङ् गर्नुपर्छ र अरुको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी लेख्नु हुँदैन ।
तपाईँलाई के लाग्छ, के ब्लगमा आचार-संहिता हुनु जरुरी छ ?
मलाई ब्लगिङ्मा आचार-संहिता चाँहिदैन जस्तो लाग्छ किनभने ब्लग भनेको व्यक्तिगत साइट हो । आचार-संहिताभन्दा पनि आफैँ जिम्मेबार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यदि ब्लगमा सेन्सर हुने हो भने आफ्नो मनमा लागेका कुरा कसरी बाहिर आउन सक्छ ?
ब्लग बाहेक अरु कुन कुन सोसल मिडिया चलाउनु हुन्छ ?
म फेसबुक, टुइटर चलाउँछु । म आफ्नो ब्लग लिङ्क शेयर गर्न फेसबुक चलाउँछु । टुइटरमा चाहिँ मेरो विभिन्न क्षेत्रका साथीहरु हुनुहुन्छ र मुख्यत: म सूचना आदान-प्रदान गर्नको लागि यसको प्रयोग गर्छु ।
सोसल मिडियाले नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ । आफ्नो कुरा राख्न पाउने, सूचना आदान-प्रदान गर्ने, कहीँ-कतै जमघट गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ । सोसल मिडियाले विश्वलाई साँगुरो बनाइदिएको छ ।
यसको नकारात्मक कुरा मलाई के लाग्छ भने यसले मानिसहरुको सामिप्यतालाई घटाइदिएको छ । सोसल मिडियामा अहिले विकृति देखिएको छ, व्यक्तिगत रुपमा आक्षेप लगाएर बोल्ने, आफ्नो पहिचान लुकाउने, फेक अकाउन्ट बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने जस्ता प्रवृति देखिएको छ ।
अहिले सोसल मिडियाको माध्यमबाट थुप्रै सामाजिक कार्यहरुको थालनी भएको छ, यसमा तपाईँको के धारणा छ ?
यो त एकदमै राम्रो काम भइरहेको छ । Nepal Unites, Book For Village, TFC Nepal जस्ता अभियानहरु शुरु भएका छन् । सामान्य रुपले साथीहरु एक ठाँउमा भेला भएर यस्ता कार्यहरु गर्न सोसल मिडियाले सहज बनाइदिएको छ । धेरै साथीहरु जम्मा हुने एउटा थलोको रुपमा विकास भएको छ ।
मेरो रिपोर्टको बारेमा के धारणा छ ?
मेरो रिपोर्टले जो साथीहरुको ब्लग छैन उहाँहरुलाई ब्लगिङ् गर्न सजिलो बनाइदिएको छ र ब्लग हुने साथीहरुलाई अरु पाठकसमक्ष आफ्नो ब्लग शेयर गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । हरेक नागरिक पत्रकार हुन सक्छ भन्ने अवधारणालाई यसले साकार पारिदिएको छ ।
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on September 21, 2012 at 8:39pm
Comment by Suraj Kumar Aryal on September 20, 2012 at 7:03am
धन्यबाद दाजुहरु लेनिन बन्जाडे, कुमार फुँयाल र इन्द्रध्वज क्षेत्री सबैलाई, हजुरहरुकै हौसला र प्रेरणाले नै हो कथा "मृत्यु बिक्रीमा छ" लेखिएको र त्यहि कथा नै मेरो यहाँसम्मको यात्राको सहयात्री बन्यो | फेरी एकपटक धन्यबाद |
Comment by Lenin Banjade on September 19, 2012 at 11:33pm
धेरै बधाइ :) छुचो रक्स के लास्टाँ :) Great !!
Comment by Pagal Basti on September 19, 2012 at 5:29pm
साताका ब्लगर हुन सफल सुरज कुमार अर्याललाइ बधाइ एबं शुभकामना
Comment by Indra Dhoj Kshetri on September 19, 2012 at 3:10pm
लौ बधाई छ है ।